शितल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र सीबीच ४० मिनेट कुराकानी, के- के भयो छलफल ? — Imandarmedia.com
शितल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र सीबीच ४० मिनेट कुराकानी, के- के भयो छलफल ?
काठमाडौँ । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले शनिबार राती समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
दुई राष्ट्रपतिबीच साँझ सात बजेपछि राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा भेट भएको हो। भेटका क्रममा दुई राष्ट्रपतिले दुई पक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र सहकार्यबारे छलफल गरेको सरकारी श्रोतले जनाएको छ ।
झन्डै ४० मिनेट भएको कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध भएको र नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको राष्ट्रपति भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं रेलमार्गलाई पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ पर्यटक ल्याउने विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले कुरा राखेको बताइएको छ । काठमाडौंलाई चीनसँगको सीमा नाका केरूङसम्म सहज रूपले जोड्न चीन सरकारले ३० किलोमिटर लामो सुरूङ मार्ग बनाइदिनेबारे सीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
भेटका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चीनले गरेको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपालले चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई सहज बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपाल-चीन सम्बन्ध अटल रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको विकासमा सहयोग गर्न चीनले तयार रहेको बताए। सीले ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीले दुबै देशबीचको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। सीले नेपाल भ्रमण वर्षमा चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल घुम्न प्रेरित गर्ने पनि बताए।
दुई राष्ट्रपतिको भेटवार्ता पौने ८ बजेतिर सकिएको थियो। भेटवार्ता सकिएपछि दुबै राष्ट्रपति सीको सम्मानमा भण्डारीले सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको रात्रीभोजमा सहभागी भएका छन्।
पछिल्लो २३ वर्षमा नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने सी पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति हुन्। सी भारतको चेन्नईबाट सी एयर चाइनाको विषेश विमानबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन्। यसअघि सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए।
सीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वागत गरेकी छन्। सीलाई स्वागत गर्न उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकार विभिन्न मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारी विमानस्थल पुगेका थिए । विमानस्थलमा नेपाली सेनाको विशेष टुकुडीले राष्ट्रपति सीलाई सम्मान गारत गार्डअफ अनर दिएको छ।